Anjara asan'i Seychelles amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fandriampahalemana any Etazonia?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Anjara asan'i Seychelles amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fandriampahalemana any Etazonia?
Maninona i Seychelles no firenena matanjaka indrindra eto Afrika? The Repoblikan'i Seychelles manana olom-pirenena latsaky ny 100,000 nefa mijanona ho firenena matanjaka indrindra eto Afrika. Toerana nofinofy fialantsasatra ny firenena nosy.
Ity rivo-piainan'ny nosy milamina any Seychelles ity dia afaka mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny politika sy ny fifandonana ary ny diplaomasia manerantany. Maninona raha asiana anjara andraikitra amin'ny fanalefahana ny resaka ady eo amin'ny Etazonia sy Iran.
Ny fizahantany no indostria lehibe indrindra eto amin'ny firenena Ranomasimbe Indianina. Ny ady eo amin'i Etazonia sy i Iran dia mety hanimba ity indostria ity any Seychelles sy ho an'i Afrika ho toerana fitsangatsanganana.
Seychelles dia manana tombotsoam-pirenena mazava amin'ny fanalefahana ny toe-javatra ary mitana andraikitra tsy miandany amin'izao fotoana izao.
Ny mpanorina sy filohan'ny Ivotoerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany (IIPT) nankany Iran tamin'ny 2008 manokatra ity varavarankely ity ho an'ny fifampiresahana eo amin'i Iran sy Etazoniamanandrana mamporisika ny firenena roa tonta hanohy ny Taom-piangonana iraisam-pirenena 2001 ho an'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo sivilizasiôna.
Ny sakaizan'ny rehetra, ny fahavalon'ny tsy misy toa ny fizahantany ho an'ny rehetra mijanona ho hafatry ny mpitondra fizahan-tany Seychelles. Ity dia nambaran'i Alain St. Ange voalohany fony izy minisitry ny fizahantany ho an'ity Repoblika kely amin'ny Ranomasimbe Indianina ity.
Androany i St. Ange no filohan'ny Birao fizahantany afrikanina ary ny ao anatiny dia nilaza fa mety ho tonga amin'ny lasa izy filohan'i Seychelles. Louis D'Amore dia mpikambana iray amin'ny birao ao amin'ny birao fizahantany afrikanina.
Amin'izao fotoana izao, Seychelles no firenena matanjaka indrindra eto Afrika raha resaka zom-pirenena afrikanina.
Miaraka amin'ny dia tsy misy visa any amin'ny firenena 140, ny Seychelles Passport dia laharana pasipaoro iraisam-pirenena matanjaka indrindra atsy Afrika.
Izany dia araka ny fandinihana farany natao momba ny Fanondroana pasipaoro
Ny firenena faharoa matanjaka indrindra aty Afrika amin'ny alàlan'ny pasipaoro dia i Maorisy izay manana toerana tsy misy visa 136 hotrandrahana, ny isa 3 dia ankafizin'ny olom-pirenena Afrikanina Tatsimo miaraka amin'ny firenena 102.
Ny zom-pirenena voafetra indrindra atsy Afrika dia manana ny Somalia miaraka amin'ny 41, Sudan miaraka amin'ny 48 ary Libya izay firenena 49 ihany no mamela ny dia tsy visa.
Seychelles dia manaraka ny politikany izay fariparipany ho tsy fampifanarahana “miabo” ary manohana mafy ny fitsipiky ny fihenan'ny fisian'ny fahefana lehibe any amin'ny Ranomasimbe Indianina. Ny governemanta Seychelles dia iray amin'ireo mpanohana ny faritry ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Ranomasimbe Indianina ary nampiroborobo ny fahatongavan'i Etazonia tany Diego Garcia izy io. Nandray ny politikany pragmatika anefa ny firenena, nefa kosa izy io dia toeram-pialan-tsasatra sy fialamboly lehibe ho an'ny sambo amerikana manompo any amin'ny Golfa Persia sy ny Ranomasimbe Indianina. Ny toeran'ny politikan'ny raharaham-bahiny Seychelles dia nametraka izany tamin'ny ankapobeny ankavia amin'ny fiparitahana ao anatin'ny Hetsika tsy mifanaraka. Russia, United Kingdom, France, India, the Republic of China, Libya ary Cuba dia mitazona masoivoho any Victoria.
Angamba ity fametrahana tsy manam-paharoa ity paradisa fialan-tsasatry ny Ranomasimbe Indianina ity dia mety hanana anjara toerana lehibe amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena, toa an'i Etazonia sy Iran. Ny olom-pirenena Seychelles dia tsy mila visa handehanana any Iran.
Tsindrio eto raha mila lisitr'ireo pasipaoro afrikanina amin'ny filaharan'ny fidirana amin'ny visa tsy misy visa manerantany.